Ngaba Ukutshintsha Kwefaneli Yokuthengisa? | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 18, 2013 NgoMvulo, Februwari 18, 2013 UJenn Lisak Golding
Njengoko sonke sisazi, ukuthengisa kunye nentengiso zihlala ziguquka. Ke ngoko, iintengiso kunye neentengiso zentengiso ziyatshintsha. Ngelixa sisenokungayithandi, kufuneka siziqhelanise.
URainToday.com usandula ukupapasha iposti kwesi sihloko kanye, sinesethu abaxhasi bokuthengisa ngokuzenzekelayo, Ekunene kuNxibelelwano. UTroy Burk, i-CEO kunye nomsunguli, wenza amanqaku amahle. Kodwa kukho enye into eyoyikisayo kubathengisi:
Ngokwe-Forrester Research, phantse isiqingatha sabo bonke abathengisi be-B2B bathi bavala ngaphantsi kwe-4% yazo zonke iindlela zokuthengisa ezenziweyo. Ngaphaya koko, ingaphantsi kwama-25% yayo yonke ingeniso enxulumene nentengiso.
Njengomthengisi, yinto eyoyikisayo leyo. Cinga ngako-ngumsebenzi wethu ukwenza izikhokelo nokubakhulisa. Ukuba siguqula kuphela iipesenti ezi-4, ke amanqanaba ethu e-c ngokuqinisekileyo awonwabanga nathi kwaye akazimisele ukuchitha uhlahlo-lwabiwo mali kwiinzame zethu. Ngaphandle kwala manani, oku akunjalo kwaphela.
Sifanele kuyo nayiphi na imibutho. Ngapha koko, ngelixa i-75% yengeniso ivela kuthengiso oluphezulu kunye nokuhanjiswa, uninzi lohlahlo-lwabiwo mali luya ekwakheni nasekukhuliseni izikhokelo ezitsha kwiteli yentengiso. Siphila! Kwaye kufuneka.
Ingxaki iyonke kwihlabathi lanamhlanje ledijithali kukulungelelanisa ukuthengisa kunye nentengiso. Ngokwesiko, la bekusoloko kungamasebe amabini ahlukeneyo. Nokuba zikho okanye azikho kwiminyaka emitsha, kubalulekile ukuba izicwangciso zokuthengisa kunye nezicwangciso zentengiso zihambelane kwaye zibe nenkqubo esesikweni emiselweyo ukuze isibonelelo singabinamthungo kwaye sifike ngexesha. Ukuzenzekelayo kwentengiso yindlela yokwenza oku. Ukuthengisa kuthumela ukuthengisa idilesi ye-imeyile ekhokelayo entsha, ukuthengisa kuyabongeza kwinkqubo, inkqubo yokuthengisa ezenzekelayo iyila kwaye ilandele iprofayile yomthengi, kwaye omabini la maqela ngoku "ayazi" malunga nethemba elenziwa kwaye bayenza nini. Akusoloko kuhamba ukuhamba komsebenzi, kodwa ngokuqinisekileyo sisiseko sokuba yintoni enokuba yimpumelelo kwindlela yokuvala izikhokelo ezingaphezulu zentengiso.
Iinjongo zentengiso yefaneli kunye nefaneli yokuthengisa inokwahluka, kodwa iifowuni zokuthatha isenzo kunye nokuthengisa ubomi zifikile, ngokwembono yedijithali. Kutheni ungasebenzi kunye?
Ukuthengisa kunye nokuthengisa kubalulekile ngokulinganayo kwintengiso yemijikelo yobomi- masiyeke ukulwa kwaye siqale ukusebenza kunye.
tags: uqhagamshelwanoukuzenzekela ngokuzenzekelayoyokuthengisaUkucingelayokuthengisa
Feb 18, 2013 ngo-1: 40 PM
Ngokuqinisekileyo lo ngumba endikhe ndadibana nawo. Akunjalo ukuba kukho naluphi na uthando olulahlekileyo phakathi kokuthengisa kunye nokuthengisa, kodwa ukuba sinemiba ephambili eyahlukileyo. Ukuthengisa (kwihlabathi lam) malunga neemetrics kunye ne-ROI (mhlawumbi imveliso yokuba kufuneka sihlale sibonakalisa ixabiso lethu), kanti ukuthengisa kuxhalabele kakhulu malunga nokusebenzisana okukodwa kunye nokuvala umxhasi ngamnye ngexesha.
Olona nxibelelwano lwethu lukhulu kukulandela umkhondo wefenitshala ngokupheleleyo ukuya kwinkqubo yokuvala intengiso. Ndiyakwazi ukulandelela izikhokelo esizizisayo, kodwa kufuneka sithembele kubasebenzi bokuthengisa ukuba bangene kwaye balandele ingeniso yokwenyani ngokufanelekileyo, akusoloko kunjalo. Dibanisa oko kunye nenyaniso yokuba kwishishini lethu (iinkonzo zomrhumo ophezulu kakhulu, ubukhulu becala), izikhokelo zethu zinokungena zivela kulo naliphi na inani lamakhulu okuchukumisa, kwaye ngokwenene ukubethelela i-ROI kuwo nawuphi na umsebenzi othile kunokuba nzima.
Feb 18, 2013 ngo-2: 56 PM
Enkosi ngezimvo, Tyler! Ndiyavumelana nezimvo zakho malunga nezinto eziphambili ezahlukeneyo. Yinyani leyo. Kodwa ndicinga ukuba ukuba sobabini siyaqonda ukuba iinzame zethu zisebenzela injongo efanayo ngokwenza imisebenzi eyahlukeneyo, ngoko sinokulungelelanisa izinto eziphambili zethu ngendlela engcono (kwaye sivune imivuzo!).
Ukuya kuthi ga kwi-ROI, bendihlala ndicinga ukuba kunzima ukumisela i-ROI yokuthengisa okanye intengiso iyonke. Kukho imisebenzi esiyenzayo engenakho “ithegi yexabiso” kuyo. Ngokuqinisekileyo, i-rep rep inokuba nekofu enokubakho kwaye bacofa nje, kwaye kulapho loo mbono wagqiba ekubeni ufuna ukusebenza naloo nkampani. Kodwa ukuguqulwa akuzange kwenzeke de kwiinyanga ezi-2 kamva ngenxa yezinye izinto zangaphakathi okanye zangaphandle. Kwihlabathi “lokuchukumisa izinto ezininzi”, asazi ukuba senze nini impembelelo. Yeyiphi imisebenzi ekufuneka ibene-ROI? Yonke into ayicacanga kwaye kunzima ukuyiqonda.
Feb 18, 2013 ngo-3: 36 PM
Ngokuqinisekileyo ndiyavuma. Asiyongxaki ilula ukuyilungisa. Indlela yam kukwenza ucazululo lweenkcukacha-manani ukusuka phezulu kwefunnel yakho kwaye ufumanise ukuba zeziphi iintlobo zemisebenzi ebaluleke kakhulu kuwe.
Ke, umzekelo, ukuba uthi i-2% yetrafikhi yendalo kwindawo yakho ingenisa isicelo solwazi oluthe kratya, kwaye kwi-2%, i-30% ekugqibeleni iguqulelwe kwintengiso, kwaye ezo ntengiso ziphelele kwi-100k yeedola, emva koko unokwenza uhlalutyo. Qikelela ixabiso lendwendwe entsha yendalo oyivelisayo - ngokusisiseko i-ROI ebotshelelwe ngokuthe ngqo kwixesha lakho le-SEO / umzamo.
Unyanisile ukuba amanqaku amaninzi ayenza nzima, nangona kunjalo. Owu - ndithembe - ndiyazi yonke loo nto. Kodwa, ndicinga ukuba kufuneka okungenani sibe nemilinganiselo eqikelelweyo ukuze siphucule iinkqubo zethu, sandise iidola zethu, kwaye songeze ixesha lethu. (umzekelo, ngaba kufuneka sichithe iiyure ezili-10 ngaphezulu ngenyanga sisebenza kwi-SEO?
Feb 18, 2013 ngo-3: 40 PM
Amanqaku amahle, Tyler. Enkosi ngeengcinga zakho! Ndikulandele nje kuTwitter. Ndijonge phambili ukuva ngakumbi.